सहकारीको ९१ लाख गायब, संचालकहरु प्रहरी फन्दामा – samyantra.com
सहकारीको ९१ लाख गायब, संचालकहरु प्रहरी फन्दामा
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २६, २०७४ समय: १३:५६:५१
मोरङ । मोरङको सुन्दरहरैचा ९ मा रहेको पानस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९१ लाख बढी रकम हिनामिना भएको पाइएपछि संस्थाका ब्यबस्थापक सहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
सर्बसाधारणको लाखौ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा संस्थाका ब्यबस्थापक बिमला राई सहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुुुुसन्धान गरिरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरिक्षक रामजी कटुवालले जानकारी दिए । संस्थाको खाता समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुुुुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुल ४ सय ८३ जना शेयर सदस्यहरु रहेको संस्थाको बचत रकम समेत जोखिममा परेको उजुरीका आधारमा ब्यबस्थापक सहित पदाधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अनसन्धानकै क्रममा रहेका कारण यकिन रकम यति भन्ने नभएपनि ९१ लाख बढी रकम हिनामिना देखिएको र अनुसन्धानका लागि संस्थाका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीको भनाई छ ।
कसरी भएको रहेछ रकम हिनामिना ?
संस्थामा रहेका शेयर सदस्यहरुले बचत गरेको रकम समेत समयमा नपाएको र ऋण समेत नपाएपछि पटक पटक संस्थाका सदस्यहरुले रकम खोई ? भनेर पदाधिकारीहरुलाई खोज्ने गरेका थिए । संस्थाका ब्यबस्थापक र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले कहिले बैँकमा रकम भएको बताउथे त कहिले ऋणमा लगानी गरेको बताउँथे ।
जस्ले संस्थामा ऋण नै लिएका थिएनन् उनीहरुको खातामा समेत लाखौ ऋण देखाईएको थियो । संस्थामा २०७१ देखि २०७३ साल सम्ममा सो रकम हिनामिना भएको देखिन्छ । संस्थाका अध्यक्ष देबेन्द्र मास्के आफु बिरामी भएर बिगत ६ महिनादेखि संस्थामा आफु नगएको बताएपनि यो रकम उनी संस्थामा जाँदा खेरी नै हिनामिना भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
संस्थाका ब्यबस्थापक राई सहित केही सञ्चालक समितिका सदस्यहरुकै मिलेमोतोमा लाखौ रकम हिनामिना देखिएको प्रहरीले बताएको छ । अनुसन्धानका लागी पदाधिकारी र खाता समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भईरहेको प्रहरी निरिक्षक कटुवालले बताएका छन् , बेतना दैनिकमा खबर छ ।